အမေရိကန်သမ္မတ ဘားရက် အိုဘားမားက ၎င်းအနေဖြင့် အမေ ရိကန်၏ အချိန်ပိုအလုပ်လုပ်ခြင်းဆိုင် ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန် တွန်းအားပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အမေရိကန်လူလတ် တန်းစား များကို အကျိုးရှိစေရန်ဖြစ်ကြောင်း၊ သူ၏အစိုးရအနေဖြင့် နိုင်ငံရေးအောင် မြင်မှုများ ရရှိလာပြီး နောက် ယခုကဲ့ သို့ ပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
တချို့အမျိုးသမီးတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ဘဝမှာပြုလုပ်မယ့် အရာတွေကို ကြိုတင်အစီအစဉ်တွေ ချမှတ်တတ်ကြ ပါတယ်။ ဥပမာ- ၂၇ နှစ်မှာ စေ့စပ်မယ်၊ ၃၀ နှစ်မှာ လက်ထပ်မယ်၊ ၃၁ နှစ်မှာ ကလေးယူမယ် အဲလိုမျိုး တွေပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဒီလို ဘဝမှာagenda တွေ ထားရှိမယ်ဆိုရင် သီအိုရီ အရတော့ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းတော့ ဖြစ်ပါတယ်။ တစိုက်မတ်မတ်လျှောက်လှမ်းဖို့မှာကျတော့ မသင့်တော်ပြန်ပါဘူး။ လူတိုင်း သိသင့်တဲ့ အချက်တွေကတော့ အသက်ရှင်နေတဲ့ ဘဝတစ်လျှောက် ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း ကြိုတင် အစီအစဉ် ဆွဲလို့မရတဲ့ အရာတွေ အများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကို နားလည်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ လူတိုင်း ကိုယ့်စိတ်ကူး အိပ်မက်တွေဆီ ပညာရှိရှိ နဲ့ ဂရုတစိုက် လုပ်ကိုင်ဖို့ ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်… ဒါပေမယ့် အချုပ်အနှောင်တွေ ကြားကနေ ကြိုးပမ်းနေတာမျိုးတော့ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။
ကဗျာရေးသည့် ထိုင်းလယ်သူမလေး လူမှုကွန်ရက်တွင် ရေပန်းစား (DVB)
ဓာတ်ပုံ – women.kapook.com
ခုရက်ပိုင်းအတွင်း ထိုင်းလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာ ကဗျာရေးတဲ့ လယ်သူမလေးတယောက် အကြောင်း လူကြိုက်များပြီး ရေပန်းစားနေပါတယ်။
ဖွဲ့စည်းပုံမှ ပုဒ်မ-၄၃၆(ခ)ကို ပြင်ဆင်နိုင်ပါက တိုင်းရင်းသား စည်းလုံး ညီညွတ်ရေး၊ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးနှင့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရန် အထောက်အကူပြုမည်ဟု သူရဦးရွှေမန်းဆို
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် ထပ်မံဆွေးနွေးဆုံးဖြတ် မည့် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင် ရေးလုပ်ငန်း အဆက် ပုဒ်မ-၄၃၆(ခ) ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ ကို ပြင်ဆင်နိုင်ပါ က တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ် ရေး၊ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ် ရေးနှင့် ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးရရှိ ရေးအတွက် အထောက်အကူပြုနိုင် မည်ဟု ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း က ယင်း၏လူမှုကွန်ရက်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ် စာမျက်နှာမှ တစ်ဆင့် ထုတ်ပြန်လိုက် သည်။
မန္တလေးမြို့တွင် ဖမ်းဆီး ရမိခဲ့သော လက်နက်များနှင့် ဆက်စပ် သက်သေ များကို စစ်ဆေးရာမှ တရားမ၀င် လက်နက်ကိုင်ဆောင်သူ တစ်ဦးအား တန့်ဆည်မြို့နယ်တွင် ယခုလ (၃၀)ရက်နေ့၌ ထပ်မံ ဖမ်းမိခဲ့ကြောင်း တိုင်းဒေသကြီး နယ်စပ်ရေးရာနှင့် လုံခြုံရေးဝန်ကြီးဌာန ထံမှ သိရသည်။
ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲ ပူးတွဲပြုလုပ်နိုင်
အခုနှစ် နိုဝင်ဘာလဆန်းထဲမှာကျင်းပဖို့ရှိနေတဲ့ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်က လွှတ်တော်မှာ အတည်ပြုထားတဲ့ ပုဒ်မ ၅၉(ဃ)ပြင်ဆင်နိုင်ရေး ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲကိုပါ ပူးတွဲကျင်းပသွားမယ်လို့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယကဖြစ်သူ သူရဦးရွှေမန်းက ဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ လွှတ်တော်အစည်းအဝေး အစပိုင်းမှာ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
လက်နှစ်ဖက်တော့ မရှိပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အရာရာကို လုပ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ မွေးရာပါ လက်နှစ်ဖက် မပါဝင် ခဲ့တာ ဖြစ်ပေမယ့် ဘ၀ကို လုံးဝအရူံးပေး ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲ အရာအားလုံးကို လေ့လာသင်ယူ ခဲ့တာကြောင့် လေ ယာဉ်မောင်း လိုင်စင်ကိုတောင် ရယူနိုင်ခဲ့ပါ တယ်။ ဒါဟာ ထူးခြားမူဖြစ်ပြီး လက်နှစ်ဖက် မရှိသူတွေ ထဲမှာ ပထမဆုံး လေယာဉ် မောင်းနှင်နိုင်သူအဖြစ် သတ်မှတ်ခံရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် တိုက်ကွမ်ဒို ကစားနည်းမှာလည်း ခါးပတ်နက်ကို ရယူထား ပါတယ်။
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲနီးလာတာနဲ့အမျှ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်နေသူတွေ၊ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ကို မဲပေးနိုင်ဖို့ မဲစာရင်းထဲမှာပါ၊ မပါ ကြည့်ရှုသူတွေနဲ့ လှုပ်ရှားသက်ဝင်လျက် ရှိပါတယ်။ ဒါဟာ ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက် နိုင်ငံ သားတိုင်းမလွဲမသွေ လုပ်ဆောင်ရမယ့် ၀တ္တရားလည်းဖြစ် ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရွေးကောက်ပွဲကို ပျက်စီးရာ ပျက်စီးကြောင်း ကြံစည်နေတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းရှိနေပါတယ်။ တော်တော်လေး စိတ်မကောင်းစရာပါ။ ကိုယ့်နိုင်ငံ၊ ကိုယ့်လူမျိုး တိုးတက် ကြီးပွားမှာကို မလိုလားတဲ့ သဘောလို့ပြောနိုင်ပါတယ်။
တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့များ DDR လုပ်ငန်းစဉ်ကို လက်ခံရန်အရေးကြီးဟု ကာချုပ်ပြော
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့် တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ ၊ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာန ၊ အာရှရေးရာ ဌာနမှ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် H.E. Mr. Sun Guoxiang တို့ ဇွန်လ ၂၉ ရက်က တွေ့ဆုံစဉ်
(ဓာတ်ပုံ – မြဝတီ)ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့် တရုတ်ပြည်သူ့ သမ္မတနိုင်ငံ ၊ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာန ၊ အာရှရေးရာဌာနမှ မြန်မာနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် H.E. Mr. Sun Guoxiang တို့ ဇွန်လ ၂၉ ရက်က တွေ့ဆုံစဉ်(ဓာတ်ပုံ – မြဝတီ)
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေး အဖွဲ့များ အနေဖြင့် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေး ကဏ္ဍတွင် လက်နက် ဖြုတ်သိမ်းရေး၊ စစ်မှုထမ်းအဖြစ်မှ နုတ်ထွက်ခွင့်ပြုခြင်းနှင့် အရပ်သားများအဖြစ် ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေး ဆိုသည့်(DDR) လုပ်ငန်းစဉ် ကို လက်ခံကြရန် အရေးကြီးကြောင်း တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် က ပြောဆိုလိုက်သည်။
ပြင်သစ်နိုင်ငံက ပေးအပ်တဲ့ အမြင့်ဆုံး ဆုတံဆိပ်တခုဖြစ်တဲ့ National Order of Merit စွမ်းရည်ဆိုင်ရာ ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုကို မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီအရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသား ခေါင်း ဆောင် တဦးဖြစ်သူ ကိုမင်းကိုနိုင်ကို ချီးမြှင့် အပ်နှင်းလိုက်ပါတယ်။
ဆွစ်ဇာလန်မှ ပန်းချီပညာရှင် Filippo Ioco ဟာ Body painting ကို အထူးပြု တတ်မြောက်ကျွမ်းကျင်ပါ တယ်။ သူ့ရဲ့တီထွင်ဖန်တီးမှုများကို ယခုလို မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနား နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှာ နည်းပညာတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားသမဂ္ဂကို ဖွဲ့စည်း လိုက်ကြောင်း မြစ်ကြီးနားမြို့ ရှမ်းစုတောင်ရပ်ကွက်က မန္တလေးကျောင်းမှာ ဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောပါတယ်။
အနည်းဆုံးအခကြေးငွေ သတ်မှတ်ပြီးနောက် စက်ရုံများ ကုန်ကျမှုစရိတ်လျော့နည်းသက် သာစေရန်နှင့် အလုပ်သမားများ အား လစာတိုးပေးနိုင်ရန်ရည်ရွယ် ၍ ယင်းသို့ဖယ်ရီပေးရန် စီစဉ်နေ သည်ဟု အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်သမား ဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန ညွှန် ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဝင်းရှိန်က ပြောသည်။
‘‘အလုပ်ရုံတွေအတွက် ဖယ် ရီတွေလုပ်သွားဖို့ရှိတယ်။စီစဉ်နေ တယ်ပေ့ါ။ လောလောဆယ်တော့ စက်မှုဇုန်ဥက္ကဋ္ဌတွေဆီကနေ သ ဘောထားမှတ်ချက် တောင်းခံ ထားတယ်’’ဟု ဦးဝင်းရှိန်က ပြော သည်။
တည်ထောင်ပြီး တစ်နှစ်ကြာချိန်အထိ အိုင်အက်စ်အဖွဲ့ အင်အားကောင်းနေ
အယ်လ်ကိုင်ဒါအဖွဲ့ ၀င်ဟောင်းများ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အိုင်အက်စ်အဖွဲ့က ဆီးရီးယားနှင့် အီရတ်နိုင်ငံ တို့တွင် ၎င်းတို့ သိမ်းပိုက်ထားသော ဒေသများ၌ အစ္စလာမ်မစ်နိုင်ငံတော် တည်ထောင်ကြောင်း ကြေညာပြီး နောက် တစ်နှစ်အကြာတွင် အမေရိကန်ဦးဆောင်သည့် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာဖိအားများနှင့် ရင်ဆိုင် နေရသော် လည်း အင်အားအလွန် ကောင်းနေဆဲဖြစ်ကာ အဓိကမြို့ များကို ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ဆဲဖြစ် ကြောင်း ကန်စစ်ဌာနချုပ် ပင်တဂွန်က ပြောသည်။
လွှတ်တော်တွင်းရှိ တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်များ ထွက်ခွာပေးရန် ဆန္ဒပြတောင်းဆို ====== ဆန္ဒပြအဖွဲ့နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံ
ဇွန်လ၃၀ရက်က ရန်ကုန်မြို့တွင် ဆန္ဒပြသူများနှင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်တွေ့နေစဉ်-ဓာတ်ပုံ−ဂျေမောင်မောင်(အမရပူရ)
၂၀၀၈ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေပြင်ဆင်ပေးရန်နှင့် လွှတ်တော်တွင်းရှိ တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ် ၂၅ရာခိုင်နှုန်း ထွက်ခွာပေးရန် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂမှကျောင်းသား ၅၀ခန့်က ရန်ကုန်မြို့တွင် ကန့် ကွက်ဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ကြပြီး ဆန္ဒပြသူများနှင့်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ ၀င်များ ထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။